ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် မရိုးတဲ့ IMDB rating မြင့် အန်နီမေးရှင်း ရုပ်ရှင် (၄) ကား - For her Myanmar
ကြည့်ပြီးသား.. ကြိုက်ပြီးသား… ဘယ်တော့မှ မမေ့နိုင်မယ့် ကားလေးတွေလို့ ထင်ပါတယ်နော်…
ကာတွန်းကားဆိုတာ ကလေးတွေပဲ ကြည့်ရတယ်လို့ ဘယ်သူက ပြောလဲနော်? တကယ်တော့ ကာတွန်းကားတွေဟာ stressတွေကို အကောင်းဆုံး ဖြေလျော့ပေးတဲ့ ဖျော်ဖြေရေးဇာတ်ကားတွေ ဖြစ်သလို သူ့ဟာနဲ့သူ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ သဘောတရားလေးတွေ၊ အတုယူစရာလေးတွေ ပါနေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ခုတစ်ခေါက်မှာတော့ ဘယ်နှစ်ခါကြည့်ကြည့် မရိုးနိုင်တဲ့ IMDB rating မြင့်တဲ့ အန်းနီးမေးရှင်းဇာတ်ကားလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော်….
(1) Chicken Run (2000)
ဒီဇာတ်ကားလေးက ၂၀၀၀ခုနှစ်တည်းက ထွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး 90s kids တွေ အကြိုက်ပေါ့။
IMDB –7အထိ ရထားပြီး ဒရာမာ/ဟာသ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အင်္ဂလန်ပြည်၊ ယော့ခ်ရှိုင်းယားက လယ်ကွင်းတစ်ခုထဲက ကြက်တွေဟာ လျှပ်စစ်ဝါယာခြံနဲ့ ခတ်ထားခံရပြီး အမြဲဥဥပေးရပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဥမဥနိုင်တော့ဘူးဆို ခြံပိုင်ရှင်လင်မယားရဲ့ သတ်စားခြင်းကို ခံရပါတော့တယ်။ သူတို့ဟာ ထွက်ပြေးဖို့ ကြံကြပေမဲ့ မအောင်မြင်ကြဘဲ အမြဲ ပြန်အမိခံနေရပါတယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ ကြက်ခြံထဲကို ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ အမေရိကန် ကြက်တစ်ကောင်ရောက်လာပါတော့တယ်။ တစ်ဆက်တည်းမှာပဲ ကြက်သားအစာသွပ်လုပ်တဲ့ စက်တစ်ခုက ခြံထဲကို ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ အချိန်ဆွဲနေလို့ မရတော့ဘဲ မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ ထွက်ပြေးမှ ရပါတော့မယ်။
ခြံအမြင့်ကြီးမှာ လျှပ်စစ်ဝါယာကြိုးနဲ့၊ အနားမှာလည်း ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ခွေးနှစ်ကောင် စောင့်ကြည့်တာ ခံရတဲ့ ကြက်လေးတွေ ဘယ်နည်းနဲ့များ ထွက်ပြေးနိုင်ကြမှာလဲ?
သူတို့ရဲ့ မစ်ရှင်ကကော အောင်မြင်ပါ့မလား?
စတာတွေကိုတော့ ပိတ်ကားပေါ်မှာ ရှုပေါ့ ယောင်းတို့ရေ…
သနားစရာလည်း ကောင်းသလို ဇာတ်ကောင် ကြက်လေးတွေကလည်း အူတက်နေအောင် ရယ်ရတာမို့ ဘယ်တော့ကြည့်ကြည့် မရိုးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတစ်ခုပါပဲ။
(2) Spirited Away (2001)
ဂျပန် ဒစ်စနီလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ studio Ghibli ရဲ့ အကောင်းဆုံး ရုပ်ရှင်လို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားပါ။ IMDB 8.6 ရထားပြီး ကမ္ဘာ့ ဒုတိယဝင်ငွေအများဆုံး anime ဇာတ်လမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ကူးယဉ်/ ထူးဆန်းထွေလာ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဆယ်နှစ်သမီးလေး ချီဟီရိုနဲ့ သူ့မိဘတွေဟာ လူသူမနေတဲ့ ပန်းခြံလို နေရာတစ်ခုကို ရောက်သွားပါတယ်။ လူတွေမရှိဘဲ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ ထူးဆန်းစွာ ပြည့်နှက်နေတဲ့ အဲဒီ ပန်းခြံမှာ ချီဟီရို အဖေနဲ့ အမေဟာ အစားအသောက်တွေ စားမိပြီး ညဘက်မှာ ဝက်ဘဝကို ပြောင်းသွားပါတော့တယ်။
တကယ်တော့ အဲ့နေရာဟာ တစ္ဆေတွေ အပန်းဖြေတဲ့ နေရာ ဖြစ်ပြီး ချီဟီရို တစ်ယောက် သူမ မိဘတွေ ပြန်လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် အဲ့နေရာမှာ သရဲတွေနဲ့ အတူနေပြီး စွန့်စွန့်စားစား အလုပ်လုပ်ရပါတော့တယ်။
ဉာဏ်နီဉာဏ်နက်များပြီး ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တစ္ဆေလောကမှာ ချီဟီရို တစ်ယောက် ဘယ်လိုများ ရှင်သန်နေထိုင်မှာလဲ?
ဆိုတာကို တော့…. မပြောတော့ပါဘူးနော်။ Spoil မိမှာ စိုးလို့
မှော်ဆန်ဆန် ဇာတ်လမ်းကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် အတော်လေး မိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကောင်လေးတွေကြောင့် ဘယ်နှစ်ခါ ကြည့်ကြည့် ရင်ထဲထိတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
(3) Ratatouille (2007)
စိတ်ကူးယဉ်/ဒရာမာ ဖြစ်ပြီး IMDB 8 အထိ ရထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဆန်းတော့ ဆန်းကြယ်ပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ အိပ်မက်တွေရှိတာ မဆန်းပေမဲ့ ကြွက်လေးတစ်ကောင်က စားဖိုမှူး ဖြစ်ချင်နေတာတော့ ဆန်းလှပါတယ်။ ကြွက်လေးနာမည်က Remy ဖြစ်ပြီး သူ့အိပ်မက်ကြောင့် မိသားစုနဲ့ မကြာခဏအတိုက်အခံဖြစ်ရတာပေါ့..
တစ်ရက် သူ့အစ်ကိုက မုန့်သွားခိုးစားရင်း အိမ်ရှင်အဒေါ်ကြီးက သေနတ်နဲ့ပစ်တဲ့အခါ တစ်မိသားစုလုံး ထွက်ပြေးရပါတော့တယ်.. (ကြွက်မိသားစုကြီး ထွက်ပြေးတာကို အချဉ်တော့ မထင်စေချင်.. သေချာကြည့်ရင် ကြက်သီးပါထမယ် 😀 ) ပြေးရင်းလွှားရင်း တကယ်တော့ လူစုကွဲ အဲလေ ကြွက်စုကွဲသွားပြီး Remy ရဲ့ စိတ်ကူးအိပ်မက်ထဲက စားသောက်ဆိုင်ကြီးကို Remy တွေ့လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ…
Remy တစ်ယောက် သူ့အိမ်မက်တွေကို အပြည့်အဝအကောင်ထည်ဖော်နိုင်ပါ့မလား?
ဘယ်လို အခက်အခဲ စိန်ခေါ်မှုတွေကို ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ခဲ့လဲ?
ဆိုတာ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပြန်နွှေးပြီး ပြန်ကြည့်ကြပါနော်
nothing is impossible ဆိုတာ သက်သေပြသွားတဲ့ ကြွက်လေးဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့ လွဲချော်ပုံတွေက အတော်လေး ရယ်ရတာမို့ ကြည့်ရတာတန်မယ့် အန်နီမေးရှင်းလေးပါ။ အစားသောက်တွေကိုလည်း ရှယ်ချက်ပြတာမို့ သွားရည်လည်း ယိုရပါတယ်။
(4) Cloudy withachance of meatballs
မိုးပေါ်ကနေ အစားအသောက်တွေကျလာရင် ကောင်းမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ဖူးပါသလား ? ဒါဆို ဒီဇာတ်လမ်းကို ကြည့်လိုက်ပါလို့။
IMDB7ရထားပြီး သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်အိမ်အကျဉ်းကတော့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့ Swallow Falls မြို့လေးဟာ အခြေအနေတွေ ခက်ခဲနေတာမို့ ဆာဒင်းငါးပဲ စားနေရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့မှာတော့ လူငယ်သိပ္ပံပညာရှင်လေး Flint Lockwood ဟာ ဒီပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ စက်တစ်ခု တီထွင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီစက်ကတော့ မိုးပေါ်ကနေ စားကောင်းသောက်ဖွယ်တွေ အဆက်မပြတ်ကျလာစေတဲ့ စက်ပါပဲ။
အစကတော့ အားလုံး ပြုံးပျော်ကြပေမဲ့ စက်ကို မထိန်းချုပ်နိုင်တော့တဲ့အခါ….
မြို့လေး တစ်ခုလုံး အစားအသောက်တွေအောက်မှာ တဖြည်းဖြည်း နှစ်မြှုပ်လာတဲ့အခါ ….
ဒီအန္တရာယ်ကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းဖို့ လိုလာပါတော့တယ်။
ရောင်စုံ Ice-cre​am တွေ pizza တွေ အသားချောင်းကြီးတွေ မိုးပေါ်က ကျလာတာမို့ foodie တွေ အမြဲအမှတ်ရနေမယ့် အန်နီမေးရှင်းကားကောင်း တစ်ကားလို့ ပြောရင် လွန်မယ်မထင်ပါဘူးနော်…
ကဲ…ဒါတွေကတော့ ယောင်းတို့ ငယ်ဘဝကို ပြန်အမှတ်ရစေသလို ဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့် အမြဲကြည့်ကောင်းနေတဲ့ အန်နီးမေးရှင်းကားလေးတွေပါ။ ပြန်နွှေးကြည့်ကြမယ် ဟုတ်?
reference links: IMDB Pixar Dream World
ကွညျ့ပွီးသား.. ကွိုကျပွီးသား… ဘယျတော့မှ မမနေို့ငျမယျ့ ကားလေးတှလေို့ ထငျပါတယျနျော…
ကာတှနျးကားဆိုတာ ကလေးတှပေဲ ကွညျ့ရတယျလို့ ဘယျသူက ပွောလဲနျော? တကယျတော့ ကာတှနျးကားတှဟော stressတှကေို အကောငျးဆုံး ဖွလြေော့ပေးတဲ့ ဖြျောဖွရေေးဇာတျကားတှေ ဖွဈသလို သူ့ဟာနဲ့သူ အဓိပ်ပာယျရှိတဲ့ သဘောတရားလေးတှေ၊ အတုယူစရာလေးတှေ ပါနတေတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ခုတဈခေါကျမှာတော့ ဘယျနှဈခါကွညျ့ကွညျ့ မရိုးနိုငျတဲ့ IMDB rating မွငျ့တဲ့ အနျးနီးမေးရှငျးဇာတျကားလေးတှကေို ပွောပွပေးမယျနျော….
ဒီဇာတျကားလေးက ၂၀၀၀ခုနှဈတညျးက ထှကျခဲ့တာဖွဈပွီး 90s kids တှေ အကွိုကျပေါ့။
IMDB –7အထိ ရထားပွီး ဒရာမာ/ဟာသ ဇာတျလမျးလေး ဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ အင်ျဂလနျပွညျ၊ ယော့ချရှိုငျးယားက လယျကှငျးတဈခုထဲက ကွကျတှဟော လြှပျစဈဝါယာခွံနဲ့ ခတျထားခံရပွီး အမွဲဥဥပေးရပါတယျ။ တကယျလို့မြား ဥမဥနိုငျတော့ဘူးဆို ခွံပိုငျရှငျလငျမယားရဲ့ သတျစားခွငျးကို ခံရပါတော့တယျ။ သူတို့ဟာ ထှကျပွေးဖို့ ကွံကွပမေဲ့ မအောငျမွငျကွဘဲ အမွဲ ပွနျအမိခံနရေပါတယျ။
တဈနမှေ့ာတော့ ကွကျခွံထဲကို ဉာဏျကောငျးတဲ့ အမရေိကနျ ကွကျတဈကောငျရောကျလာပါတော့တယျ။ တဈဆကျတညျးမှာပဲ ကွကျသားအစာသှပျလုပျတဲ့ စကျတဈခုက ခွံထဲကို ရောကျလာတဲ့အခါမှာတော့ အခြိနျဆှဲနလေို့ မရတော့ဘဲ မဖွဈဖွဈတဲ့နညျးနဲ့ ထှကျပွေးမှ ရပါတော့မယျ။
ခွံအမွငျ့ကွီးမှာ လြှပျစဈဝါယာကွိုးနဲ့၊ အနားမှာလညျး ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ ခှေးနှဈကောငျ စောငျ့ကွညျ့တာ ခံရတဲ့ ကွကျလေးတှေ ဘယျနညျးနဲ့မြား ထှကျပွေးနိုငျကွမှာလဲ?
သူတို့ရဲ့ မဈရှငျကကော အောငျမွငျပါ့မလား?
စတာတှကေိုတော့ ပိတျကားပျေါမှာ ရှုပေါ့ ယောငျးတို့ရေ…
သနားစရာလညျး ကောငျးသလို ဇာတျကောငျ ကွကျလေးတှကေလညျး အူတကျနအေောငျ ရယျရတာမို့ ဘယျတော့ကွညျ့ကွညျ့ မရိုးတဲ့ ဇာတျလမျးတဈခုပါပဲ။
ဂပြနျ ဒဈစနီလို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ studio Ghibli ရဲ့ အကောငျးဆုံး ရုပျရှငျလို့ ဆိုနိုငျတဲ့ ဇာတျကားတဈကားပါ။ IMDB 8.6 ရထားပွီး ကမ်ဘာ့ ဒုတိယဝငျငှအေမြားဆုံး anime ဇာတျလမျးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
စိတျကူးယဉျ/ ထူးဆနျးထှလော ဇာတျလမျး ဖွဈပွီး ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဆယျနှဈသမီးလေး ခြီဟီရိုနဲ့ သူ့မိဘတှဟော လူသူမနတေဲ့ ပနျးခွံလို နရောတဈခုကို ရောကျသှားပါတယျ။ လူတှမေရှိဘဲ စားကောငျးသောကျဖှယျတှေ ထူးဆနျးစှာ ပွညျ့နှကျနတေဲ့ အဲဒီ ပနျးခွံမှာ ခြီဟီရို အဖနေဲ့ အမဟော အစားအသောကျတှေ စားမိပွီး ညဘကျမှာ ဝကျဘဝကို ပွောငျးသှားပါတော့တယျ။
တကယျတော့ အဲ့နရောဟာ တစ်ဆတှေေ အပနျးဖွတေဲ့ နရော ဖွဈပွီး ခြီဟီရို တဈယောကျ သူမ မိဘတှေ ပွနျလှတျမွောကျဖို့အတှကျ အဲ့နရောမှာ သရဲတှနေဲ့ အတူနပွေီး စှနျ့စှနျ့စားစား အလုပျလုပျရပါတော့တယျ။
ဉာဏျနီဉာဏျနကျမြားပွီး ကွောကျစရာကောငျးတဲ့ တစ်ဆလေောကမှာ ခြီဟီရို တဈယောကျ ဘယျလိုမြား ရှငျသနျနထေိုငျမှာလဲ?
ဆိုတာကို တော့…. မပွောတော့ပါဘူးနျော။ Spoil မိမှာ စိုးလို့
မှျောဆနျဆနျ ဇာတျလမျးကွိုကျတဲ့သူတှအေတှကျ အတျောလေး မိုကျတဲ့ ဇာတျကားဖွဈပွီး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျကောငျလေးတှကွေောငျ့ ဘယျနှဈခါ ကွညျ့ကွညျ့ ရငျထဲထိတဲ့ ဇာတျလမျးလေးပါ။
စိတျကူးယဉျ/ဒရာမာ ဖွဈပွီး IMDB 8 အထိ ရထားတဲ့ ဒီကားလေးဟာ ဆနျးတော့ ဆနျးကွယျပါတယျ။ လူတိုငျးမှာ အိပျမကျတှရှေိတာ မဆနျးပမေဲ့ ကွှကျလေးတဈကောငျက စားဖိုမှူး ဖွဈခငျြနတောတော့ ဆနျးလှပါတယျ။ ကွှကျလေးနာမညျက Remy ဖွဈပွီး သူ့အိပျမကျကွောငျ့ မိသားစုနဲ့ မကွာခဏအတိုကျအခံဖွဈရတာပေါ့..
တဈရကျ သူ့အဈကိုက မုနျ့သှားခိုးစားရငျး အိမျရှငျအဒျေါကွီးက သနေတျနဲ့ပဈတဲ့အခါ တဈမိသားစုလုံး ထှကျပွေးရပါတော့တယျ.. (ကွှကျမိသားစုကွီး ထှကျပွေးတာကို အခဉျြတော့ မထငျစခေငျြ.. သခြောကွညျ့ရငျ ကွကျသီးပါထမယျ 😀 ) ပွေးရငျးလှားရငျး တကယျတော့ လူစုကှဲ အဲလေ ကွှကျစုကှဲသှားပွီး Remy ရဲ့ စိတျကူးအိပျမကျထဲက စားသောကျဆိုငျကွီးကို Remy တှလေို့ကျရတဲ့အခြိနျမှာ…
Remy တဈယောကျ သူ့အိမျမကျတှကေို အပွညျ့အဝအကောငျထညျဖျောနိုငျပါ့မလား?
ဘယျလို အခကျအခဲ စိနျချေါမှုတှကေို ဘယျလိုရငျဆိုငျခဲ့လဲ?
ဆိုတာ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ပွနျနှေးပွီး ပွနျကွညျ့ကွပါနျော
nothing is impossible ဆိုတာ သကျသပွေသှားတဲ့ ကွှကျလေးဖွဈပွီး သူ့ရဲ့ လှဲခြျောပုံတှကေ အတျောလေး ရယျရတာမို့ ကွညျ့ရတာတနျမယျ့ အနျနီမေးရှငျးလေးပါ။ အစားသောကျတှကေိုလညျး ရှယျခကျြပွတာမို့ သှားရညျလညျး ယိုရပါတယျ။
မိုးပျေါကနေ အစားအသောကျတှကေလြာရငျ ကောငျးမယျလို့ စိတျကူးယဉျဖူးပါသလား ? ဒါဆို ဒီဇာတျလမျးကို ကွညျ့လိုကျပါလို့။
IMDB7ရထားပွီး သိပ်ပံစိတျကူးယဉျ ဇာတျလမျးဖွဈပါတယျ။ ဇာတျအိမျအကဉျြးကတော့ ကြှနျးနိုငျငံလေးဖွဈတဲ့ Swallow Falls မွို့လေးဟာ အခွအေနတှေေ ခကျခဲနတောမို့ ဆာဒငျးငါးပဲ စားနရေပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တဈနမှေ့ာတော့ လူငယျသိပ်ပံပညာရှငျလေး Flint Lockwood ဟာ ဒီပွဿနာကို ဖွရှေငျးဖို့ စကျတဈခု တီထှငျလိုကျပါတယျ။ အဲဒီစကျကတော့ မိုးပျေါကနေ စားကောငျးသောကျဖှယျတှေ အဆကျမပွတျကလြာစတေဲ့ စကျပါပဲ။
အစကတော့ အားလုံး ပွုံးပြျောကွပမေဲ့ စကျကို မထိနျးခြုပျနိုငျတော့တဲ့အခါ….
မွို့လေး တဈခုလုံး အစားအသောကျတှအေောကျမှာ တဖွညျးဖွညျးနဈမွှုပျလာတဲ့အခါ ….
ဒီအန်တရာယျကို အမွနျဆုံး ဖွရှေငျးဖို့ လိုလာပါတော့တယျ။
ရောငျစုံ Ice-cream တှေ pizza တှေ အသားခြောငျးကွီးတှေ မိုးပျေါက ကလြာတာမို့ foodie တှေ အမွဲအမှတျရနမေယျ့ အနျနီမေးရှငျးကားကောငျး တဈကားလို့ ပွောရငျ လှနျမယျမထငျပါဘူးနျော…
ကဲ…ဒါတှကေတော့ ယောငျးတို့ ငယျဘဝကို ပွနျအမှတျရစသေလို ဘယျခြိနျကွညျ့ကွညျ့ အမွဲကွညျ့ကောငျးနတေဲ့ အနျနီးမေးရှငျးကားလေးတှပေါ။ ပွနျနှေးကွညျ့ကွမယျ ဟုတျ?
Tags: animation, Fun, high, IMDb, Movie, rated, rating, review
Aye Mon Kyaw January 9, 2019